အန္တာတိကတိုက်ကြီးသည်အလွန်အေးသောတိုက်ကြီးဖြစ်ပြီးလူအနည်းငယ်သာယင်းကိုလည်ပတ်ခဲ့ကြပြီး၎င်းရေခဲတောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောသွာလူမျိုးများကခြေဖြင့်သွားလာခဲ့ကြသည်။ သောတိုက်ကြီး၏အနောက်ဘက်အစိတ်အပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ကံကောင်းသောလူများထဲမှတစ်ခုမှာ ၀ ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှအမေရိကန်မှ Glaciologist ဖြစ်သူ Knut Christianson ဖြစ်သည်။ သူသည်၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနွေးထွေးမှု၏အကျိုးဆက်များကိုခန့်မှန်းရန်၎င်းကိုလေ့လာရန်ရည်ရွယ်သည်။
သူယနေ့အထိရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အရာသည်လက်တွေ့ကျကျမဟုတ်ဘဲ Apocalyptic ပုံပြင်နှင့်တူသည်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာစဉ်းစားစရာများစွာပေးသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါသည်, »ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လျှင်ထိုင်းလူမျိုးများမှစတင်လိမ့်မည်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ရေခဲမြစ်ပညာရှင် Ian Howat ဟောကိန်းထုတ်ထားသည့်အတိုင်း ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လဲ?
အန္တာတိကတိုက်၏ရေခဲသည်ကတ်ပြားများကဲ့သို့အရည်ပျော်သည် တွန်းသည်အထိတည်ငြိမ်နေ၏။ ၎င်းသည်တစ်ညလုံးမဖြစ်နိုင်သည့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာတွင်ထိုင်းရေခဲတောင်များဆုံးရှုံးမှုသည်တိုက်ကြီးအနောက်ပိုင်းရှိကျန်ရေခဲများကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသည်။ ငါလုပ်ပြီးတာနဲ့ ကမ်းခြေနှင့်မိုင် ၅၀ အတွင်းနေထိုင်သူများအားလုံးကိုအန္တရာယ်ပြုလိမ့်မည်ဆိုလိုသည်မှာကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ထက်ဝက်ဖြစ်သည်။
ဒီဟာဘယ်လောက်ကြာမလဲ ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင်းနှင့်ရေခဲဒေတာဒါရိုက်တာ Mark Serreze ကတိုက်ကြီးဟာအိပ်ပျော်နေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်အခု "ဒီဟာရွေ့လျားနေတယ်" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် Larsen B ရေခဲတုံးသည်အရည်ပျော်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ပျောက်ကွယ်သွားမှုက၎င်းနောက်ကွယ်မှရေခဲမြစ်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ယခင်ကထက် ၈ ဆပိုမိုမြန်ဆန်စွာစီးဆင်းစေသည်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပါတယ် Larsen ကို C ပလက်ဖောင်း ၁၆၀ ကီလိုမီတာရှိသောအက်ကြောင်းတစ်ခုတွေ့ရသဖြင့်အလားတူကံကြမ္မာကိုခံစားကြရသည်။
NASA မှ Eric Rignot နှင့် Washington တက္ကသိုလ်မှ Ian Joughin တို့၏လေ့လာချက်အရ Thwaites ရေခဲမြစ်တွင်ဤကဲ့သို့သောမတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုကိုလုပ်ဆောင်နေသည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » အန္တာတိက၏နွေးထွေးမှုသည်လူသားတို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်